Ikhaya > Mayelana NATHI
I-Xing xing Tai Long ekhethekile ye-Cera, Ltd yasungulwa ngonyaka we-1997, enakekela ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ekhiqiza umlilo azolwa enobuhlakani nekhadeli.
I-xing xing tai eside ekhethekile ye-ceramic Co, Ltd yaqothulwa ngo-2009 futhi itholakala esifundazweni saseLiling, eHunan, eChina. Siyinkampani ekhethekile ye-Ceramic ekhethekile enelungelo lokungenisa nokuthumela ngaphandle. Sikhethekile ku-Fire Assay Ceramics, ama-Alumina ceramics, imikhiqizo ye-ceramic ye-refractional, njll., Senza ngokwezifiso imikhiqizo ekhethwe ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Njengomenzi onamandla ochwepheshe womlilo onobuhlakani obunobuhlakani, sinamamitha ayi-7000 amamitha ama-New Factory efektri ngentambo yokukhiqiza ezenzakalelayo. Imikhiqizo isetshenziselwa ukuhlaziywa kwensimbi okuyigugu, ukuhlolwa kwezimayini kwelebhu, okulondoloziwe kokutholwa kanye nokudla kwegolide. Izinto ezibonakalayo ze-Fire Assay Crucibles ziyi-fireclay exutshwe nezinye izinto zokuvuselela, zingamelana nokushisa kuze kube yi-1300 ℃. Banokumelana okuhle nokuhlaselwa kwe-flux, ukuguguleka, ukuqhekeka kanye nokushaqeka okushisayo.
Ukunamathela kunqubomgomo yebhizinisi yezinzuzo ezihambisanayo, siye saba nedumela elithembekile phakathi kwamakhasimende ethu ngenxa yezinsizakalo zethu zobungcweti, imikhiqizo yekhwalithi namanani ancintisanayo. Samukela ngemfudumalo amakhasimende avela ekhaya nakwamanye amazwe ukuze abambisane nathi ngempumelelo ejwayelekile. Kuyo yonke le minyaka, imikhiqizo yethu ithengiswa kahle ezweni lonke, futhi yathunyelwa eJalimane, e-United States, eBrazil, eRussia, amazwe angaphezu kwama-20, ikhwalithi yomkhiqizo idunyiswe kakhulu ngamakhasimende.
Inhloso yethu ukuthi: Ikhwalithi ephezulu, intengo ephansi, ukholo oluhle. Silangazelela ngokweqiniso ukubambisana okubanzi kwamakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe, intuthuko evamile.
Akunamkhawulo kunani. Singanikeza isiphakamiso esihle kakhulu kanye nezixazululo ngokuya ngesimo sakho.
Uhlobo luni lwesitifiketi onalo?
Uyayemukela ibhizinisi le-OEM?
Yebo, sinikeza insizakalo ye-OEM ne-ODM. Vele usithumele umdwebo wakho uma unayo. Uma ungenawo umdwebo, vele usitshele umbono wakho, sizokwenzela umdwebo wakho.
Yini indinganiso yephakeji?
Yini isikhathi sokulethwa?
Izinsuku eziyi-7 zokusebenza zemikhiqizo ejwayelekile izinsuku ezingama-30 zemikhiqizo eyenziwe ngezifiso.
Uma imikhiqizo inenkinga ethile yekhwalithi, ungabhekana kanjani na?
Ngingathola amasampula efektri yakho?
Yebo, isampula likhululekile, kepha inkokhelo evelayo ingeyakho.
]I-Xing xing Tai Long ekhethekile ye-Cera, Ltd yasungulwa ngonyaka we-1997, enakekela ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ekhiqiza umlilo azolwa enobuhlakani nekhadeli.Imikhiqizo isetshenziselwa ukuhlaziywa kwensimbi okuyigugu, ukuhlolwa kwezimayini kwelebhu, okulondoloziwe kokutholwa kanye nokudla kwegolide. Izinto ezibonakalayo ze-Fire Assay Crucibles ziyi-fireclay exutshwe nezinye izinto zokuvuselela, zingamelana nokushisa kuze kube yi-1300 ℃. Banokumelana okuhle nokuhlaselwa kwe-flux, ukuguguleka, ukuqhekeka kanye nokushaqeka okushisayo.Njengomenzi onamandla ochwepheshe womlilo onobuhlakani enobuhlakani neCuplel, sinamamitha-skwele angama-7000 amasha wefektri entsha enomugqa wokukhiqiza othomathikhi.Inkampani ihlala inamathela ekusindeni kwekhwalithi, ukusungulwa okusha kanye nentuthuko, ubuqotho bomkhiqizo, ukuvikela kanye nokucabanga kwamabhizinisi wezemisebenzi ngemuva kwenhloso. Kuyo yonke le minyaka, imikhiqizo yethu ithengiswa kahle ezweni lonke, futhi yathunyelwa eJalimane, e-United States, eBrazil, eRussia, amazwe angaphezu kwama-20, ikhwalithi yomkhiqizo idunyiswe kakhulu ngamakhasimende."Ikhwalithi ephezulu, intengo ekhethekayo '' ukuphatha kwethu i-tenet. Silindele ngobuqotho ukubambisana nobuningi bamakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe, ukuthuthukiswa okuvamile! Uyemukelwa ukuvakasha nokuphenya inkampani yethu.